Efa nihamafy ve ny satroboninahitry ny Apple Watch? | Avy amin'ny mac aho
Efa nihamafy ve ny satroboninahitry ny Apple Watch?
Rehefa mandeha ny andro dia misy zavatra vaovao fantatra momba ny Apple Watch. Raha ny ankamaroany dia zavatra tsara momba ny fiasan'ity fahagagana vaovao an'ny Apple ity, ny hafa kosa bibikely hita. Ny marina dia manomboka mieritreritra ny vaovao nomenay izahay izay nitateranay fa nanana laboratoara miafina i Apple Apple Watch dia notsapaina nandritra ny volana maro ary tsy azontsika ny tsy fahitana ireo tsy fahombiazana ireo tao anatin'izany toe-javatra izany.
Andro vitsy lasa izay, ny zava-misy fa ny sensor Apple Watch dia tsy nandrefy ny tahan'ny fony raha toa ka nanana tatoazy ilay mpampiasa teo amin'ny sehatry ny fifandraisan'ny famantaranandro tamin'ny hoditra. Lohahevitra iray hafa efa niresaka betsaka ny hoe raha ny maodely vy dia tena mora tohina ary ankehitriny, mpampiasa sasany dia nitatitra fa ny fihenan'ny satroboninahitry ny Apple Watch dia nihena.
Ny iray amin'ireo asan'ny kintana amin'ny Apple Watch dia ny fisian'ny kodiarana, toy ny famantaranandro mandritra ny androm-piainany. Satroboninahitra iray izay rehefa soloina dia mahatonga antsika hifandray amin'ny fomba tsotra kokoa amin'ny ampahany sasany amin'ny interface. Araka ny hitantsika tamina horonantsary marobe, ny fihodinana an'io dia tena malama ary tsy manome fanoherana firy, na izany aza, efa nisy mpampiasa maromaro nitatitra tao amin'ny Tranonkala mpanohana an'i Apple fa ny fihodinan'ny satroboninahitry ny fiambenan'izy ireo dia nanjary mafy kokoa.
Raha jerena io fampahalalana io dia mety hieritreritra isika fa ny olana dia mety noho ny zava-misy, rehefa nampiasaina mafy nandritra ny fanaovana spaoro, ny hatsembohana dia mety niditra tao amin'ny faritry ny rafitra satro-boninahitra ary rehefa maina izy io, ireo masira misy azy dia manjelatra. Safidy iray hafa koa ny vovoka mety niditra tao amin'ilay faritra noho ny fampiasana mahery vaika amin'ny atmosfera tsy mety. Na izany aza, misy ireo mpampiasa nitatitra fa tsy nampanaiky ny Apple Watch izy ireo tamin'ireny toe-javatra ireny Apple dia haingana nanondro izay hatao raha sendra misy izany.
Ao amin'ny tranokalan'ny Apple fanohanana dia afaka mamaky isika fa tsy maintsy manatanteraka ireo dingana ireo matetika araka izay ilaina isika mandra-pamaha ny olana:
1. Vonoy ny Apple Watch ary esory ny tariby mametra raha mifandray.
2. Esory aminy ny tadiny mba tsy ho eo an-tananay fotsiny ny vatan'ny Apple Watch.
3. Araraka ny rano amin'ny faritry ny satroboninahitra mandritra ny 10 ka hatramin'ny 15 segondra manodina sy manindry ny satro-boninahitra miaraka amin'izay.
4. Farany maina ny Apple Watch indray ary manamarina izahay fa niverina indray ny kiran'ny kodiarana.
Fampahalalana bebe kokoa | Fanohanana Apple
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Efa nihamafy ve ny satroboninahitry ny Apple Watch?
Kitendry azo hosasana Logitech K310 miaraka amin'ny fifandraisana USB nidina
Ahoana ny fomba hanjerena ny Apple Watch hahomby kokoa